Konke malunga nebhlog yeendaba ye-iPhone | Iindaba ze-IPhone (iphepha 2)
I-TikTok ye-iOS ihlaziyiwe ukuvumela ukuba ucime izimvo kwiividiyo zakho
Uhlaziyo lwamva nje lwesicelo seTikTok lubandakanya umsebenzi omtsha ekuvumela ukuba ucime ukuya kuthi ga kwizimvo ezili-100 kunye
IPodcast 12 × 31: Apple Music, Dolby Atmos kunye neHiFi
Sichaza yonke into oyifunayo malunga neApple Music entsha ngeDolby Atmos kunye nomculo ngaphandle kokulahleka komgangatho
IPodcast 12 × 30: Iapile, induduzo kunye nemidlalo yevidiyo
Sithetha malunga nokuba kunokwenzeka ukuba iApple isungule ikhonsoli yomdlalo, into enokusondela ukuba siwahoya amarhe amva nje.
Amarhe angakumbi avela malunga nokufika kwekhonsoli yeApple
Ikhonsoli yeApple yinto ekhe yajikeleza phakathi kwamarhe kangangeminyaka kwaye ngoku ibuyile
I-12 × 29 iPodcast: Amava e-AirTag kunye nokunye
Emva kweentsuku ezimbalwa nee-AirTags, saxoxa ngamava ethu nabo. Sithetha nangezinye iindaba kule veki ...
IPodcast 12 × 28: Uhlaziyo kunye nezinye iindaba
Emva kweveki sihlalutye zonke izinto ezaziwayo malunga neendaba zika-Apple kwaye ezingakhankanywanga kumsitho wabo.
IPodcast 12 × 27: Sihlalutya umsitho weApple
Sihlalutya umsitho weApple apho iPad Pro entsha, iMac eneprosesa ye-M1, i-AirTag, njl.
IPodcast 12 × 26: Yonke into esiyaziyo malunga nomsitho olandelayo nge-20
Sihlalutya yonke into esinokuyibona kwimeko apho iApple iqinisekisileyo ngo-Epreli 20, 2021 olandelayo
IPodcast 12 × 25: I-Facebook inyanda emdaka kunye ne-LG ithi ndlela ntle
Kule veki sihlalutya i-Facebook hack kunye nokushiya icandelo le-LG eliza kusishiya ngonaphakade.
IPodcast 12 × 24: I-WWDC 2021 sele inomhla
U-Apple uyenzile esidlangalaleni imihla apho inkomfa yonjiniyela ye-WWDC 2021 izakuqhubeka khona, ukuqala ngoJuni 7
I-12 × 23 I-Podcast: Usale kakuhle kwi-HomePod, silindele ntoni?
U-Apple ulahle i-HomePod yoqobo, ukugxila kwi-MiniPod Mini, oko kuthetha ukuba akusayi kubakho zintetho?
IPodcast 12 × 22: Ukuya kwi-iPad
Kule veki kwipodcast yethu sithetha ngomnyhadala olandelayo enokuba nawo uApple ekupheleni kuka-Matshi ebonisa iPads ezintsha.
I-Apple isungula iiPodcasts ezintsha zabantwana kusapho
I-Apple isungula iiPodcasts ezintsha zabantwana kusapho. Iya kuba yinkqubo ebanzi eya kufumaneka kwisicelo sePodcasts.
Uvavanyo oluSasazekayo lwaseAmazon kwiinyanga ezi-3
Ukuba ubufuna ukuzama iqonga leencwadi zomsindo weAmazon okwethutyana, ngale ntengiso, awunasizathu.
I-12 × 20 iPodcast: Umsitho kaMatshi ... Okanye hayi
I-podcast yeveki apho sihlalutya iindaba eziphambili ezenzeka kwihlabathi lobuchwephesha, sigxile kuApple.
IPodcast 12 × 19: I-iPhone 13 kunye namanye amarhe
Kule veki lixesha lokuba uthethe ngamarhe malunga ne-iPhone 13 elandelayo, ibhetri engaqondakaliyo, ii-AirTags, i-iOS 14.5 nokunye.
I-12 × 18 i-Podcast: Abaphulaphuli bayabuza, Siyaphendula
Namhlanje siphendula imibuzo yabaphulaphuli bethu, sisombulula amathandabuzo kwaye siphendula izicelo zabo.
IPodcast 12 × 17: iOS 14.5 kunye nemirhumo
Sithetha ngeendaba ze-iOS 14.5 ezikuvumela ukuba uvule i-iPhone yakho usebenzisa imaski enkosi kwi-Apple Watch.
IPodcast 12 × 16: iOS 14.4 kunye ne-iPhone 13
Sihlalutya iindaba zamva nje kunye nophuhliso kwihlabathi letekhnoloji, ngakumbi egxile kwiApple kunye neemveliso zayo.
IPodcast 12 × 15: UGurman ubetha nzima kwakhona
UMark Gurman ubuya nabo bonke ubungangamsha bakhe, esungula iibhombu ezininzi zezinto ezisilindeleyo ngo-2021 no-2022 kwihlabathi le-Apple.
I-12 × 14 podcast: I-Apple iqala unyaka womelele
Kule veki kwipodcast sihlalutya iindaba ezinxulumene neApple ngeli xesha leeholide zeKrisimesi
I-12 × 13 iPodcast: Kujikeleze iApple Car
Sinokubonakala kokuqala kwe-AirPods Pro kwaye sithetha ngemoto ye-Apple kunye nokuphikisana neFacebook.
IPodcast 12 × 12: bobabini ubuso beApple
Sihlalutya ukumiliselwa kwe-AirPods Max, ii-headphone zePrimiyamu ezifumaneka kwabambalwa kodwa sonke esifunayo.
I-12 × 11 I-Podcast: IHangover emnyama yangoLwesihlanu
I-podcast yeveki apho sihlalutya iindaba zetekhnoloji ezinxulumene ne-Apple kunye nokhuphiswano, ngolwazi kunye noluvo.
IPodcast 12 × 10: Enye yekalika kunye nesanti
Sithethe ngokwahluka kwamaxabiso kwiimveliso zeApple, ezona zibiza kakhulu kwaye zexabiso eliphantsi yinkampani yeapile.
IPodcast 12 × 09: Iveki yeeHits
Sihlalutya iindaba zale veki, inqabile into yokuba bonke badumise ukukhutshwa kwe-Apple.
Iipodcast ezikhoyo kwiApple Podcast ngoku zinokufakwa kulo naliphi na iphepha lewebhu
Enkosi ngesixhobo esitsha sewebhu esiveliswe yiApple, singadibanisa iApple Podcast kulo naliphi na iphepha lewebhu.
I-Podcast 12 × 08: Sihlalutya umcimbi "Enye into"
U-Apple wazise iMac entsha nge-processor yayo, iM1. Sikuxelela iindaba asibonise zona kumsitho wakhe.
Umdyarho weWarp Drive Teleport! iyafumaneka kungekudala kwiApple Arcade
Umdyarho weWarp Drive Teleport! Umdlalo uzakufumaneka kungekudala kwiApple Arcade. Umdlalo wokubaleka wexesha elizayo
IPodcast 12 × 07: Yintoni esiyilindeleyo kuMnyhadala weMac olandelayo
Sikuxelela yonke into esiyaziyo malunga nomsitho olandelayo "One More Thing" u-Apple awucwangcisele uNovemba 10.
I-Podcast 12 × 06: Masithethe ngetshaja
Kule veki lixesha lokuba uthethe ngetshaja. Ngaphandle kwamacingo okanye iintambo? Ukukhawuleza okanye ukucotha? Onke amathandabuzo, kule podcast
Mihla le-Into esingayithandiyo malunga neApple
Namhlanje kufuneka sithethe ngazo zonke izinto esingazithandiyo malunga neApple, ezo singazisusa kunye nezo singathanda ukuzitshintsha.
IPodcast 12 × 05: Sihlalutya uphononongo lokuqala lwe-iPhone 12 kunye ne-iPad Air 4
Emva koqwalaselo lokuqala lwe-iPhone 12 kunye ne-12 Pro entsha kunye ne-iPad entsha yomoya, sihlalutye ezona zilungileyo kunye nezibi kunye neengozi.
IPodcast 12 × 04: Uhlalutyo lwentetho ye-iPhone 12
Kwisiqendu sale veki sihlalutya iindaba esiziveliswe ngu-Apple kumnyhadala we-ayeR: i-iPhone 12, i-HomePod Mini, iMagSafe.
IPodcast 12 × 03: I-iPhone 12 iya kuboniswa ngo-Okthobha 13
Yintoni esinokuyibona kumsitho we-13 ka-Okthobha? I-iPhone entsha, ii-AirTags, i-HomePod mini, iMac ARM entsha ...
IPodcast 12 × 02: Ukukhupha i-iOS 14 kunye no-Apple Watch Series 6
Sithetha nge-iOS 14 kunye no-Apple Watch Series 6, ezona zinto zibalulekileyo kunye nezinye iindaba zeveki.
IPodcast 12 × 01: Uhlalutyo lomsitho weApple
Sihlalutya umsitho weApple apho usibonise khona iApple Watch, i-iPad kunye nezinye iinkonzo ezinje ngoQeqesho +.
IPodcast 11 × 49: Sinomnyhadala ngoSeptemba 15
https://youtu.be/hZJJWqwfffE Después de días de lucha directa entre Gurman y Prosser, no hemos tenido lanzamiento de nuevos productos hoy (como…
IPodcast 11 × 48: NgoSeptemba nango-Okthobha babelana ngayo
Ngaba siya kukhupha ngoSeptemba? Kwaye kwenziwa kwi-Intanethi ngo-Okthobha? Siza kuyibona nini iApple Watch? Kwaye i-iPad?
IPodcast 11 × 47: I-iPhone 12, Epic kunye nokunye okuninzi
https://youtu.be/7oL7D_rTb7o Tras un par de semanas de descanso nos encontramos con un enfrentamiento histórico entre Epic y Apple, así como…
IPodcast 11 × 46: Siya eholideyini
Siya eholideyini kodwa ngaphandle kokufaka izimvo kwiindaba zamva nje ezinxulumene neApple: I-iPhone 12, iApple Bukela i6 kunye nemidlalo yokusasaza.
IPodcast 11 × 45: Iimaski kunye ne-ID yobuso
Kodwa sinazo ze-ID yobuso ngoku kufuneka siphathe imaski kuyo yonke indawo. Yintoni ekufuneka yenziwe nguApple? Ngaba siza kubuyela kwi-ID yeTouch?
Mihla le-Umlingo wee-AirPods kunye nengxaki yazo enkulu
Nge-iOS 14 i-Apple ivuselela umlingo wee-AirPod ngemisebenzi emitsha kodwa isagcina ukubuyela umva kwayo: ibhetri.
I-Spotify isungula ii-podcast zevidiyo eziza kukhuphisana ne-YouTube
Iipodcast zevidiyo kwiSpotify ngoku ziyafumaneka ngokusemthethweni, nangona okwangoku, azikho ngeSpanish, linyathelo lokuqala lokuma kwiYouTube.
Mihla le-iAirports zeApple ezilahlekileyo
Ingaphezulu kweminyaka emibini okoko iApple yalahla iirouters zayo zeAirPort. Akukho marhe malunga neemveliso ezintsha ...
IPodcast 11 × 44: Itshaja, iibhetri kunye neentambo
Kule veki sithetha ngebhetri ye-iPhone elandelayo, nokuba iyakubandakanya itshaja okanye hayi, kunye nentambo enokuthi ibandakanywe ebhokisini.
IPodcast 11 × 43: Ukuphuhlisa iiNkqubo ze-iOS 14
Kule podcast yale veki sithethe nonjiniyela osixelelayo ukuba kunjani ukuphuhlisa ii -apps ze-iOS, kunye notshintsho olubalulekileyo eApple.
Yonke imihla-i-iPhone ngaphandle kwetshaja?
Sithethe malunga nokuba kungenzeka ukuba iApple ayibandakanyi itshaja kwibhokisi ye-iPhone 12 elandelayo, edala impikiswano enkulu.
IPodcast 11 × 42: Amava ngeeBetas
Emva kweveki kuvavanywa ii-Betas ze-IOs, i-iPadOS, ii-macOS kunye ne-watchOS sikuxelela umbono wethu malunga nohlaziyo olulandelayo ...
IPodcast 11 × 41: Uhlalutyo lweWWDC 2020
Sihlalutya zonke iindaba esizibonileyo namhlanje kwinkcazo ye-Apple kwi-iOS 14, kwi-MacOS 11 Big Sur nakwamanye amaqonga.
Yintoni entsha kwiPensile yeApple
Keynote WWDC 2020: yintoni entsha kwiPensile yeApple
IPodcast 11 × 40: Kwiveki enye ukusuka kwiWWDC 2020
Ngaphantsi kweveki ukuba iWWDC 2020 yenzeke apho siza kubona i-iOS 14, iwotsOS 6, ...
11 × 39 I-Podcast: I-WWDC ifumana iToast
I-Mac entsha eneprosesa ye-ARM, iMac entsha kunye nayo yonke into esiyaziyo malunga ne-iOS 14 kule podcast yale veki, kwiiNdaba ze-iPhone
Yonke imihla-iKhaya eKiti yeVidiyo ekhuselekileyo itshintsha yonke into
Namhlanje kufuneka sithethe ngeVidiyo eKhuselekileyo yeKhayaKit, ukusebenza okutsha kwabo bavelisi bekhamera kancinci kancinci ...
IPodcast 11 × 38: I-WWDC esilindele nge-MACiLustrated
Kule veki sithetha nge-WWDC elandelayo kunye nabalingane be-MACiLustrated. Yintoni esinokuyibona, into esingathanda ukuyibona kunye nento esingazukuyibona
Mihla le-Isibane kunye ne-Calculator ye-app hoax eba imali yakho
Siqhekeza ubuqhetseba esele sibubonile kwiingxelo zeendaba malunga nobungozi besicelo seFlash kunye neCalculator, ngelishwa nje.
11 × 37 I-Podcast: I-Jailbreak Kwakhona… Ngaba ukhona umntu okhathalayo?
Sithethe ngeJailbreak entsha ye-iOS 13.5 kunye nezinye iindaba zeveki ezinxulumene netekhnoloji kunye nehlabathi leApple.
I-Apple ifuna ukukhuthaza umxholo wepodcast wokuqala kwiqonga layo
Ingcamango ka-Apple yokuphucula iinkonzo zevidiyo ezihamba phambili kukudala umxholo wokuqala we-Apple Podcast onokufikelela kwiscreen esincinci
I-11 × 36 i-Podcast: i-Apple Glass, i-COVID-19 kunye nokunye
Sihlalutya onke amarhe kunye nokuvuza malunga ne-Apple Glass, kunye neendaba zohlaziyo kwi-iOS 13.5 kunye ne-app ngokuchasene ne-COVID-19 eSpain.
Yonke imihla-ndithathe isigqibo ngeMacBook Air Kutheni ungasebenzisi iMacBook Pro?
KwiPodcast yemihla ngemihla, ucacisile ukuba kutheni ndikhethe ukuphucula iMacBook Air ngaphezulu kweMacBook Pro esisiseko.
Inkqubo yeVenkile yeApple ngoku ixhasa imowudi emnyama
Kuthathe ngaphezulu kweenyanga ezisi-8 ukuba iApple ivumile ukuba isicelo seVenkile yeApple asikahlaziywa kwimowudi emnyama ye-iOS 13
IPodcast 11 × 35: Amarhe malunga ne-iPhone 12 kunye ne Studio yeAirPods
Sihlalutya amarhe amva nje malunga ne-12 ye-iPhone elandelayo, apho phantse zonke iinkcukacha zayo zinokubakho
Mihla ngemihla-Indlela yokuNxibelelana nokuKhangela iiNkqubo ze-COVID-19
Izicelo ezifuna ukusetyenziselwa ukulandelela abafowunelwa abanokosulelwa yi-COVID-19 kunye nemibuzo yabo malunga nomsebenzi wabucala.
I-11 × 34 Podcast: Iiprosesa ezintsha zeMacBook, iWWDC 2020 kunye nokunye
I-WWDC 2020 iqala ngoJuni 22, kwaye sithetha nge-13-intshi iMacBook Pro entsha ekhutshwe kule veki kunye nezinye iindaba
11 × 33 I-Podcast: IMac yokuqala ene-ARM ngo-2021
Kubonakala ngathi iminyaka yamarhe kunye nezityholo zokuvuza zivaliwe ngokuqinisekiswa ngokusungulwa kweMac yokuqala nge ...
IPodcast 11 × 32: I-iPhone SE kunye neKhibhodi yeMilingo, ezi zinto zimbini zigqithisileyo ze-Apple
Siphonononge ukukhutshwa okutsha okuvela kuApple, i-iPhone SE entsha kunye nekhibhodi yomlingo, i-iPhone enexabiso eliphantsi kunye nekhibhodi ebiza kakhulu.
IPodcast 11 × 31: I-Retro ikwifashoni
Sihlalutya iindaba zeveki apho sazi ukuba kufanelekile ukuba kuyilo lwe-iPhone 12 elandelayo ...
IPodcast 11 × 30: Ukulinda ukuphelelwa lithemba
Ngelixa silinde ukufika kwe-iPhone SE okanye i-Apple's Premium headphones, sihlalutya amarhe malunga neemveliso ezizayo kunye ne-iOS 14.
IPodcast 11 × 29: Iveki yesithathu yokuvalelwa yedwa kunye nezinye iindaba
I-podcast yeveki apho sihlalutya ezona ndaba zibalulekileyo zetekhnoloji kunye neApple ihlala iphambili
11 × 28 I-Podcast: IPad Pro igubungela iMacBook Air
U-Apple uvuselele i-iPad Pro kunye neMacBook Air kule veki, siphonononge ezi zixhobo zitsha kunye nohlaziyo kwi-iOS 13.4
IPirates yeSilicon Valley: Le yindlela iApple neMicrosoft ezelwe ngayo
Iimuvi malunga neApple (1/4) [# StayEnCasa]. IPirates yeSilicon Valley yifilimu yokuqala ukwenziwa malunga nembali yeApple neMicrosoft.
IPodcast 11 × 27: I-iPhone 9 kunye ne-9 Plus zisondele
Kwiveki enzima kuthi sonke, senza kancinci ukwenza ukuvalelwa kube lula ngakumbi ngokuhlalutya iindaba ...
IPodcast 11 × 26: Zonke iinkcukacha malunga ne-iOS 14
Emva kwako konke ukuvuza ebesikade sikufumana kwezi ntsuku, sihlalutya ukuba kubonakala ngathi izakuba zeziphi izinto eziphambili ze-iOS 14, ii-watchOS 7 kunye nokunye.
IPodcast 11 × 25: I-coronavirus irhoxisa yonke into
Ukulibaziseka kwimveliso yezixhobo, ukurhoxiswa kweziganeko zetekhnoloji ... iCoronavirus iyaqhubeka nokuba liziko leendaba.
Mihla le-Iphedi yokulandelela ye-IP Pro
Ukuba simamela amarhe, iiapps zinokumisela ikhibhodi entsha kwiPad Pro elandelayo eza kubandakanya ...
Yonke imihla-Masithethe Ngee-headphone
U-Apple ukwazile ukwazisa into entsha ekufuneka ayithathele ingqalelo xa uthenga ii-headphone: amava omsebenzisi
IPodcast 11 × 24: Inqanaba likaGoogle, i-iPhone 12 nangaphezulu
Kule veki sithetha ngerhafu kaGoogle, irhafu amazwe aliqela azamile ukuyinyanzela kwitekhnoloji enkulu ngaphandle kwempumelelo
Mihla le-Guqula ii -apps ezizenzekelayo kwi-iPhone
Ngokukhawuleza iApple ingavumela ukutshintsha usetyenziso olulungiselelwe ngokungagqibekanga kwi-iPhone kunye ne-iPad, ukubeka ezi sizifunayo
IPodcast 11 × 23: Iintsholongwane kwi-macOS?
Kwiintsuku zamva nje, kuye kwakho intetho eninzi malunga nokwanda okumangalisayo kwe-malware ye-macOS, ngokwengxelo ka ...
Mihla le-Amathandabuzo ngekamva lokusonga iifowuni
Sizibonile nje iifowuni ezintsha ezisongelayo zale 2020, ezinye iingxaki zisonjululwe kodwa uninzi lwamathandabuzo lusombululwa
IPodcast 11 × 22: ICoronavirus iza kwiTekhnoloji
ICoronavirus yeyona protagonist yeebhulethini zeendaba, iincoko kwiivenkile zekofu nasemsebenzini, kunye ...
Yonke imihla- Zonke iindaba ezikwi-iOS 13.4
UApple ukhuphe i-iOS 13.4 Beta 1 kwaye yenza njalo ngezinto ezininzi ezintsha, ezinye zazo ziyamangalisa, njengokukwazi ukuvula imoto yakho nge-iPhone
IPodcast 11 × 21: Amarhe kunye namanye amarhe
Kule veki kufuneka sithethe ngamarhe avelayo malunga neemveliso ezintsha esinokuzibona kwesi siqingatha sokuqala ...
I-11 × 20 iPodcast: Isikhumbuzo se-iPad, ukungasasebenzi kunye neRekhodi eNtsha
I-podcast yeveki nganye malunga neApple kunye netekhnoloji ngokubanzi apho sithetha ngezona ndaba zibalulekileyo kwiintsuku zamva nje, amarhe, njl.
Yonke imihla-iminyaka eli-10 ye-iPad
Emva kweminyaka elishumi i-iPad isengukumkani wamacwecwe. Sihlalutya umkhondo wayo ukusungulwa kwayo ukuya kule nto iyiyo namhlanje.
Mihla: Okwangasese, ukubethela, ICloud ...
Ubumfihlo, ukubethela, i-iCloud, i-iPhone, ukhuseleko ... siya kuzama ukucacisa yonke into ngendlela elula ukubona ukuba siyazicacisa na.
IPodcast 11 × 19: Uthotho, iTouchID kunye neMfihlo
Sithetha nge-Apple TV +, ngothotho olutsha oluzayo, malunga neDisney + eza kuthi kungekudala ifike eSpain, nangobumfihlo abafuna ukubususa kuthi.
UJennifer Aniston uphumelele uMlingisi oGqwesileyo kwi-Series Award ye-Morning Show
Umboniso wasekuseni uyaqhubeka nokunika amabhaso komnye wabaphambili, uJennifer Aniston uphumelele ibhaso lomdlali weqonga obalaseleyo
Mihla le: Ayinguye wonke umntu othanda ukuba yedwa
Siya sizixhalabisa ngakumbi ngemfihlo, kodwa kukho abo bafuna ukuyiphelisa loo nto ngexabiso laso nasiphi na isizathu, nkqu noloyiko.
11 × 18 I-Podcast: I-CES yeNzululwazi
Kule veki sijonga ukuba zeziphi iindaba ezincinci ebezivela kuApple kwaye sijolise kwiimveliso zeCES ezi…
Yonke imihla-iYurophu inokunyanzela i-iPhone ukuba ibe ne-USB-C
IYurophu iphinda iqwalasele ukubanakho kokunyanzela iApple ukuba isebenzise i-USB-C kwi-iPhone yayo, kodwa eCupertino bayachasa
Mihla le-Le yindlela endiyitshintshe ngayo iMacBook yam ngePad Pro
Kunyaka odlulileyo ndatsiba kwiMacBook yam ndaya kwiPad Pro, nditshitshisa ilaptop eqhelekileyo ndithanda ithebhulethi. Ndikuxelela izigqibo zam.
IPodcast 11 × 17: Iya kusizisela ntoni i-2020?
Sihlalutya iindaba ze-Apple njengamarhe malunga ne-iPhone SE 2 entsha okanye i-iPhone 9 esinokuthi siyibone kwangoko kwi-2020
Yonke imihla - iDrayivu yeFusion… Kude kube nini?
UApple unyanzelisa ukuqhubeka nokusebenzisa itekhnoloji engasenzi ngqiqo kwaye konke okukufezekisayo kukuvelisa ibhotile kwiiMacs zayo.
Yemihla ngemihla - Ukuzenzekelayo ekhaya? Sobona
Kule veki kupapashwe iindaba zokuba iApple, iAmazon kunye noGoogle, ukongeza kwimanyano yeZigbee, benze iqela elisebenzayo lokudibanisa izinto ezenzekelayo ekhaya.
Olunye uthotho lweApple TV + ngeli xesha ihlaya Ukufuna intsomi: Isidlo seRaven
Uthotho lwamahlaya Ukufuna intsomi: Isidlo seRaven, esaziswa ngokusemthethweni kwiApple TV + ngoFebruwari ozayo
Yonke imihla-ishumi leminyaka lika-Apple liphindaphinde
I-2019 iyaphela kwaye iphela iminyaka elishumi apho iApple ijongene nemiceli mngeni emitsha nalapho yaba yinkampani eneenjongo ezintsha.
Mihla le-i-iPhone ngaphandle kombane okanye i-USB-C
Amahemuhemu amva nje athetha nge-iPhone ngaphandle konxibelelwano ngo-2021, kodwa oko kuya kuthetha ntoni? Ziza kuba naziphi iingenelo esi sigqibo?
IPodcast 11 × 16: Isishwankathelo se-2019, izibane kunye nezithunzi eApple
Sishwankathela unyaka ka-2019 eApple, olungileyo nolubi, eyona nto siyithandayo kakhulu kunye noko singenako, ukongeza ekuthetheni ngekamva elikufutshane.
'Umboniso wasekuseni' otyunjelwe i-Global Golden Globes
U-Apple uphakathi kwabatyunjelwe i-2020 yeGlobal Globes yoluhlu oluthi "Umboniso wasekuseni" noJennifer Aniston nabo batyunjiweyo
Imihla ngemihla -I-LCD, i-OLED, i-miniLED kunye nemiboniso ye-microLED
Sithetha ngezikrini ezitsha ze-miniLED kunye ne-microLED ezinokufika kwizixhobo ze-Apple ngokukhawuleza kwi-2020 elandelayo.
Mihla le- onokuyenza nge-NFC ye-iPhone yakho
Sithetha nge-NFC ye-iPhone, itekhnoloji esivumela ukuba sihlawule nge-Apple Pay kodwa ngoku inamathuba amaninzi.
IPodcast 11 × 15: Uphi umsitho weApple?
I-Podcast apho besizakuthi siphawule ngento eyenzekileyo kumsitho okhethekileyo wanamhlanje ngomhla we-2, isiganeko ekubonakala ngathi siginya uMhlaba.
IPodcast -Iveki emnyama yangoLwesihlanu
Iveki yentshukumo encinci ejikeleze iApple kwaye siza kuthatha ithuba lokubeka izimvo kwizinto ezahlukeneyo njengoko siza….
Mihla le-Abasimameli, kuba abayifuni
Ngaba ucinga ukuba i-smartphone yakho ikumamele? Inyani yile yokuba banokuyenza, kodwa ayizukubanceda, kuba abayidingi, sele beyazi yonke into abayifunayo
Yonke imihla-zithini iinethiwekhi zeMESH kwaye zisebenza njani?
Namhlanje sithetha ngothungelwano lweMESH, itekhnoloji yeWiFi yasekhaya ethi kancinci kancinci iza ...
Mihla le-iApple icula i "Mea culpa"
IOS 13 inegama elibi kakhulu phakathi kwabasebenzisi kunye nabaphuhlisi, ibangela iintloko ezininzi kuye wonke umntu oneebugs ...
I-Podcast 11 × 13: Umsitho ongakhange ulindelwe mntu
U-Apple wothuse wonke umntu ngesiganeko esingalindelwanga ngoDisemba 2, esiya kuthi sigxile ngokungalindelekanga kwaphela.
IKhayaKit, iqonga le-Apple elibonisayo, ngoku lineminyaka emi-5 ubudala. Sithatha ithuba lokuthetha ngokusebenza kwayo, ...
Ngemihla- Ukujonga iApple kunye neArhythmia
I-Apple Watch iye yavavanywa kwinqanaba layo lokufumanisa i-arrhythmia. Zithini iziphumo? Kuthetha ntoni konke oku?
I-Apple yandisa inani leempawu ezinikezela kwi-podcasters
Ukusukela kwiCupertinon bayiguqule kwaye bayandisa inani lemisebenzi enikezelwa ngoku kubavelisi beepodcast, ngaphandle kokubandakanya inkqubo yokwenza imali.
I-Spotify podcasts iyaqhubeka nokukhula kwaye igqithe iApple kumazwe aliqela aseYurophu
Kuwo wonke lo nyaka, utyalomali lukaSpotify kwii-podcast lubaluleke kakhulu, lutyalomali ...
IPodcast 11 × 12: IHabemus iMacBook Pro entsha
Sithetha ngeMacBook Pro elandelayo uGurman athi iApple izakuyipapasha ngomso, sikwathetha ngezicwangciso zika-Apple zonyaka olandelayo.
Mihla le - iiWaranti, iziLungiso kunye neAppleCare +
Kwisiqendu sanamhlanje sixoxe ngewaranti kwiimveliso ze-Apple, indleko zolungiso, kunye ne-AppleCare +.
Mihla le-yintoni i-WiFi 6 (802.11AX) kwaye iphucula njani unxibelelwano ekhaya
Yintoni i-WiFi 6? Uluphucula njani unxibelelwano lwe-intanethi kumakhaya ethu? Yintoni endiyifunayo ukuze ndikwazi ukuwasebenzisa? Yonke into icacisiwe kwesi siqendu.
Mihla le-Ukufunda, i-RAM, iFotohop kunye ne-Apple TV + imiba
Kwi-podcast yemihla ngemihla sithethe malunga nolawulo lwe-RAM ye-iOS 13.2, imiba yokugubungela imovistar, kunye nezinye izihloko ezishushu.
Mihla ngemihla -Yiphele iveki ebinokubakho kwaye ingekho
Iveki iphela apho besilindele lukhulu kodwa ekugqibeleni le nto ihleli kwisibhengezo seAirPods Pro kunye nokumiliselwa kweApple TV +.
I-11x10 Podcast: Uhlaziyo, ii-Bugs, kunye ne-AirPods Pro
Siphendula ngqo kwimibuzo osibuza yona malunga ne-AirPods Pro, ebikwi ...
Yonke imihla-i-ProPods Pro entsha, i-iOS 13.2 kunye neKhayaPod
Iimpawu eziphambili ze-AirPods Pro entsha kunye nemisebenzi emitsha ezisa uhlaziyo kwi-iOS 13.2, i-iPadOS 13.2 kunye neKhayaPod.
Mihla le-I-AirPods Pro iya kuba sendleleni
U-Apple unokutyhila i-AirPods Pro entsha kule veki kumsitho omncinci kunye neentatheli ezikhethiweyo.
Yonke imihla-I-Chip ye-U1 ye-iPhone entsha
I-chip ye-U1 inokuba sisigqubuthelo esikhulu se-iPhone entsha 11. Isandula ukukhankanywa kwinkcazo ye ...
I-Podcast 11 × 09: Kwaye i-Keynote yexesha
Sonke sinomboniso omtsha we-Apple ukuphela kwale nyanga, kodwa ngoku sinez ...
Yonke imihla-abantwana kunye ne-iPad / i-iPhone, iingcebiso ngokusetyenziswa ngokufanelekileyo
Namhlanje sithetha kwi-podcast malunga nolawulo lwabazali, njani ngeXesha lokuSebenza umsebenzi sinokulawula into eyenziwa ngabantwana bethu nge-iPad kunye ne-iPhone
Yonke imihla-Inotshi esikelelweyo
Xa ukhuseleko lwezixhobo zethu kufuneka lube lolona luphezulu, kubonakala ngathi ngoku ezinye izinto ezibaluleke ngakumbi ziya kudlala, ezinje ngeeesthetics zabo.
IPodcast 11 × 08: Uhlaziyo, uGoogle kunye ne China
Ibe veki exakeke kakhulu ngamanyathelo anyanzelwe ngu-Apple ngenxa yoxinzelelo ...
Yonke imihla-i-5G, yangoku okanye yexesha elizayo?
I-5G kukunxibelelana kwexesha elizayo, kodwa ngaba ikho nyani? Zisinceda ngantoni? Ngaba sele zifumaneka njengoko uninzi lusixelela?
Mihla le-Iprojekthi yeCatalyst, indlela eya kwi-app yendalo iphela
Iprojekthi yeCatalyst isungula kwi-macOS Catalina kwaye ikhokelela kwindlela eya kusetyenziso olusebenzayo kwi-iPhone, i-iPad kunye neMac.
IPodcast 11 × 07: Ukukhupha iMacOS Catalina
Sikuxelela iindaba zeMacOS Catalina kunye nokuqala kwethu ukubonakala kwiiyure ezingama-24 emva kokumiselwa ngokusesikweni
Yonke imihla-Yintoni eNtsha kwi-macOS Catalina
Sikuxelela ezona zinto zintsha zintsha zeMacOS Catalina, inguqulelo yamvanje yeenkqubo zokusebenza zeMac ezisandula ukwenziwa yiApple.
Mihla ngemihla-ukujonga kwangaphambili kwexesha lasebusika
Ngokutsho kweendaba kunye namahemuhemu kwiiveki ezidlulileyo sikusasaza iindaba ezinokwenzeka ukuba iApple izakuzisa kuthi ekupheleni kuka-Okthobha.
Yonke imihla-iApple TV, iApple yeTV, kunye neApple TV +
Sithethe ngomahluko phakathi kweApple TV, iapp yeApple TV, kunye nenkonzo yeApple TV +, ezintathu ezinxulumene noko kodwa ezahlukeneyo.
Mihla le- yintoni iFusion Fusion kwaye isebenza njani
U-Apple ukhuphe i-iOS 13.2 Beta 1 ekhupha i-Deep Fusion. Sichaza ukuba lo msebenzi mtsha wekhamera ye-iPhone 11 usebenza njani
IPodcast 11 × 06: Uhlaziyo kwiCascoporro
Kule podcast yale veki sithetha ngemodeli ye-Apple Arcade kunye nezinye iindaba ezinxulumene neApple kunye netekhnoloji ngokubanzi
Yonke imihla- Masithethe ngeebhetri
Kwi-Dailky yanamhlanje sithetha ngokutshaja ngokukhawuleza, ukutshaja ngaphandle kwamacingo, ukutshaja okwenziwe nge-iOS 13 ... yonke into malunga nebhetri ye-iPhone yethu
Yonke imihla-i-iPhone 11 Pro Max, umdlalo omtsha ovela kwiNintendo kunye neAmazon usibhombela
Ipodcast entsha yemihla ngemihla apho ndithetha ngamava am nasemva kweveki nge-iPhone 11 Pro Max kunye neendaba ezivela eNintendo naseAmazon.
I-Podcast 11 × 05: Ngubani owenza eyona nto iphambili?
Kule veki sithethe ngezinto ezintsha ze-smartphone kwi-podcast yethu, kunye neenguqulelo ezintsha ze-iOS kunye ne-iPadOS esungulwe ngu-Apple.
IPodcast 11 × 04: I-iPhone 11 yinkwenkwezi kwakhona
Sihlalutya uhlalutyo lokuqala lwe-iPhone 11 kunye ne-11 Pro, kunye ne-Apple Watch Series 5, ukongeza kwezinye iindaba zeveki
Yonke imihla-Hlaziya ikhalenda kunye neengcebiso zokuhlaziya
Sikuxelela ikhalenda yohlaziyo iApple eza kuqala ngalo Septemba 19 kodwa ayizukuphela de kube lixesha lokuwa
Mihla le-Izigqibo eziphambili kunye neeMfihlakalo ezingasombululwanga
Izigqibo zokugqibela kwinkcazo ye-Apple kunye neemfihlakalo ezingasombululwanga ezinje nge-RAM yee-iPhones ezintsha kunye nokubuyisa ukutshaja.
IPodcast 11 × 03: Sihlalutya umboniso we-iPhone 11 nayo yonke enye into
Emva kokwaziswa kwe-iPhone 11 entsha, iApple Watch Series 5 kunye ne-iPad entsha, sihlalutye i-Keynote ka-Apple ngokunzulu.
Landela umboniso we-iPhone 11 bukhoma
Sikuxelela indlela yokulandela umboniso we-iPhone 11 entsha kwaye uthathe inxaxheba nathi, ngokugubungela.
IPodcast 11 × 02: I-Betas, ukhuseleko, amarhe kunye neveki ye-iPhone 11
Kwiveki emva kokuphehlelelwa kwe-iPhone 11 sihlalutya iindaba ze-Apple kunye nehlabathi lobuchwephesha kunye namarhe amva nje
IPodcast 11 × 01: Siqala ixesha elitsha
Siqala isizini entsha ye-Actualidad iPhone podcast ngesiqendu apho sishwankathela yonke into eyenzekileyo ngeli hlobo e-Apple.
U-Apple wongeza udidi olutsha kuhlelo lokusebenza lwePodcast
Ngoku iApple isivumela ukuba sifumane iipodcast ezintsha ngokwendidi ezintsha ngaphakathi kokuphononongwa kwiApple Podcast app.
Thatha ithuba lesaphulelo kwiimveliso zekhaya zaseKoogeek
Sebenzisa izaphulelo ezikhethekileyo kwizixhobo zeKhayaKit, iihedfoni kunye nokunye. Ngaba uza kuphulukana nezi zibonelelo?
IPodcast 10 × 34: Isiphelo sonyaka sokuhlalutya iindaba zeApple
Siligqibile ixesha leshumi lePodcast yethu sihlalutya zonke iindaba zesoftware ethi iApple ithi thaca kwi2WWDC 2019,…
10 × 33 I-Podcast: Konke malunga ne-iOS 13, i-iPadOS, i-watchOS 6, i-MacOS 10.15 kunye ne-tvOS 13
Kule veki kwipodcast yethu sihlalutya zonke iindaba ze-iOS 13, i-iPadOS, iwOSOS 6, iMacOS 10.15 kunye ne-tvOS 13 emva kokuboniswa kweApple
I-10 × 32 I-Podcast: Iveki enye ukuya kwi-WWDC 2019
Kule veki sithetha ngeendaba esinokuzibona nge-iOS 13, iwotsOS 6, i-tvOS 13 kunye neMacOS 10.15, ukongeza kwiindaba zeteknoloji zamva nje.
Uyibukela njani iCopa del Rey yokugqibela phakathi kweFC Barcelona kunye neValencia CF kwi-iPhone yakho
Ungayibukela njani eyokugqibela yeCopa del Rey yalo nyaka kwi-iPhone yakho. Sikubonisa eyona ndlela unokukhetha kuyo
IPodcast 10 × 31: Ubumdaka bukaHuawei, iiProses ezintsha zeMacBook kunye nokunye
Sihlalutya iindaba zeveki ezichaphazela iHuawei, uGoogle kunye nemfazwe yorhwebo phakathi kukaDonald Trum ne China, kunye nezinye iindaba
IPodcast 10 × 30: Ukulungela i-iOS 13 kunye neePhones ezintsha
IOS 13 kunye nokuhambelana kwayo nezixhobo ezindala, uyilo olutsha lwe-iPhone esiza kuyibona ngoSeptemba nakwezinye iindaba
IPodcast 10 × 29: I-Apple entsha apho i-iPhone ingeyiyo iphambili
Kwisiqendu sale veki sithethe ngotshintsho lwemodeli yeshishini lika-Apple, iingxaki ezibangelwa kukuthengwa kwedijithali kunye nezinye iindaba
IPodcast 10 × 28: Lumka basimamele
Ubumfihlo buba ngumsebenzi weenkampani ezinkulu zetekhnoloji ngalo mzuzu xa imbeko yabo ibonakala ililize.
IPodcast 10 × 27: Iindaba esiza kubona kwi-iOS 13 nakwi-macOS 10.15
Kule veki sihlalutya iinguqu asilungiselele zona uApple kwi-iOS 13 kunye ne-macOS 15, kwaye kubonakala ngathi kugxile kwi-iPad
IPodcast 10 × 26: Iveki yotshintsho
Iveki yePodcasr apho sihlalutya khona ezona ndaba zibalaseleyo kwilizwe leetekhnoloji, ngakumbi malunga neApple kunye neemveliso zayo.
IPodcast 10 × 25: Enye yekalika kunye nesanti
Iveki eya kuthatha ixesha ukulibala eApple, yenye yezona zinto zibalulekileyo zokurhoxiswa kwimbali yamva nje ngaphakathi ...
IPodcast 10 × 24: Iindaba +, Ikhadi, cadeArcade kunye ne-TV +
Siwuhlalutye umsitho nge-25 ka-Matshi apho u-Apple wasazisa ngeenkonzo zayo ezintsha Iindaba +, Ikhadi, i-Arcade kunye ne-TV + Izimvo nolwazi.
IPodcast 10 × 23: Iveki eNcomekayo eApple
Iveki yokukhutshwa kwemihla ngemihla eApple, into engazange ibonwe ngaphambili. Sihlalutya iimveliso ezintsha kunye nezizayo.
IPodcast 10 × 22: Sihlalutya isiganeko esilandelayo ngo-Matshi 25
Kwisiqendu sale veki sihlalutya umsitho oza kwenzeka nge-25 ka-Matshi ngeenkonzo ezintsha ze-Apple
Uyenza njani imowudi emnyama kwi-Facebook Messenger
Ukuba ufuna ukwenza imowudi emnyama kuFacebook Messenger ngaphambi kokuba ifumaneke ngokusemthethweni, nantsi indlela yokuyisebenzisa kwi-iPhone.
I-Podcast 10 × 21: Iifowuni ezisongelayo, ukusilela kuka-Apple okungafezekanga
Emva kokumiliselwa kweefowuni ezisongelayo ezivela kwi-Samsung kunye neHuawei, uninzi luthi iApple isalele ngasemva kwakhona, nkqu neWozniak
I-10 × 20 Podcast: Rumore, Rumore
Sihlalutya amarhe ale veki malunga ne-iPhone 2019 entsha, ii-iPads ezintsha kunye nenkonzo yevidiyo esasaza iApple iceba ukuyazisa.
I-Podcast 10 × 19: Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu ku-Matshi siya kuba ne-Keynote
Sihlalutya iindaba ezenzekileyo kule veki kugxilwe ngokukodwa kwimihla enokubakho yamaNqaku aphambili alandelayo kunye nomxholo wawo
IPodcast 10 × 18: I-Betas, ukungcola nge-Facebook kunye noGoogle, kwaye asikabi nayo i-FaceTime
Kule veki kwipodcast yethu sithetha nge-iOS 13, iimveliso ezintsha eziza kufika kulo nyaka kunye nembambano phakathi kweApple, Facebook neGoogle.
IPodcast 10 × 17: Ixesha lobuso linika iApple ixesha elinzima
I-Apple iqala i-2019 ngonyawo oluphosakeleyo, okokuqala uhlaziyiweyo lwengeniso yayo kwaye ngoku sisiphene esibi sokhuseleko ngeFaceTime
I-10 × 16 iPodcast: Iibhetri, uPhuculo kunye nokunye
Ukuphehlelelwa kwetyala elitsha le-Smart Battery ye-iPhone, ukubonakala kwakhona kwe-iPhone SE kunye neendaba ezininzi ngakumbi kwipodcast yethu yeveki.
IPodcast 10 × 15: Ukuthetha malunga ne-iPhone XI
I-iPhone XI entsha sele iqala ukuba ngumdlali ophambili kwiindaba zetekhnoloji ngamarhe malunga noyilo lwayo kunye neempawu zayo.
IPodcast 10 × 14: Sithetha ngeApocalypse Apple
Kule podcast yale veki sithethe ngokuwa kwe-Apple. Uluvo kunye nohlalutyo lwezinto ezinokuba ziindaba zonyaka kwitekhnoloji
IPodcast 10 × 13: Ukushwankathela i-2018
Sihlalutya unyaka we-2018 oza kuphela. Ukukhutshwa okutsha, ukulungiswa, yintoni esothuse kakhulu kwaye yintoni engenayo.
I-10x12 Podcast: Ngabahlobo okanye ziintshaba?
Kule veki sithetha ngobudlelwane obunesiphango phakathi kweenkampani ezinkulu zobuchwephesha, ngoku abahlobo abasenyongweni kwaye kwiinyanga ezimbalwa zithiyiwe ziintshaba.
10 × 11 I-Podcast: Ikhompyuter okanye iThebhulethi?
Kule veki sithetha ngengxoxo-mpikiswano yokuba ingaba ithebhulethi ingaba yikhompyuter na, okanye ukuba ilaptop ayinakuze ithathelwe indawo yi-iPad.
10 × 10 IPodcast: Siri vs Alexa vs Google Assistant
Sihlalutya ukhetho olwahlukileyo olunikezelwa zizithethi ezi-smart: I-Apple ene-Siri, i-Amazon ene-Alexa kunye neGoogle noMncedisi kaGoogle.
IPodcast 10 × 09: IPad Pro ngaphandle kwe-iOS yokutshatisa
IPodcast esihlalutya kuyo iindaba zakutshanje ezivela kuApple kunye nokwazisa kwayo, kule veki sithetha ngeMacBook AIr, Mac Mini kunye nePad Pro.
10 × 08 I-Podcast: IPad Pro entsha, iMacBook Air kunye neMac mini
Sihlalutya iimveliso ezintsha ezivezwe ngu-Apple nakwi-Keynote yayo: IPad Pro entsha, iMacBook Air entsha kunye neMac Mini entsha
IPodcast 10 × 07: I-iPhone XR yalatha kwimpumelelo enkulu
I-iPhone XR sele ifikelele kwabokuqala abanethamsanqa abakwaziyo ukuyihlalutya kwaye sisiphelo esibonisa oyena mthengisi ubalaseleyo kule Krisimesi.
IPodcast 10 × 06: Ukushiya ifowuni ekhaya
I-podcast yeveki apho sihlalutya iindaba zeveki kwihlabathi lobuchwephesha, ngakumbi kwinto ejikeleze iApple kunye neemveliso zayo.
IPodcast 10 × 05: Okwangoku kunye nekamva lezithethi ezikrelekrele kunye noPablo Guerrero
Sihlalutya imeko yangoku yezithethi ezikrelekrele kunye nengcali efana noPablo Guerrero. Ngaba kufanelekile ukuba umgangatho wezandi okanye iimpawu ze-smart zithathe indawo yokuqala?
IPodcast 10 × 04: Sele sinayo "iGates" ye2018
Ukusuka kubenzi be-Bendgate kunye nabavelisi be-Antennagate, i-Betterygate kunye ne-Beautygate, iimpazamo ezimbini ezinzulu ze-iPhone XS, yiza kwizikrini zakho.
IPodcast 10 × 03: ICaprice okanye ukuthengwa smart?
Kule veki sithetha ngeendlela ezahlukeneyo ze-iPhone, ukuba kufanelekile ukuba uyihlaziye okanye hayi kwaye yeyiphi imodeli enokubangela umdla ngakumbi.
IPodcast 10 × 02: IiPhones ezintsha zilapha, kunye neApple Bukela nayo
Sihlalutya ukuboniswa kwe-iPhoen entsha kunye neAppel Watch. Uluvo, uhlalutyo lwento ebonisiweyo kunye noko sikuphosileyo kwipodcast yethu yeveki ongenakuphulukana nayo, phila kwisitishi sethu seYouTube.
IPodcast 10 × 1: Ukulinda i-Keynote
I-Prime epsodio yexesha leshumi apho sihlalutya yonke into esinokuyibona kumazwi aphambili kwiveki ezayo, ngombono nohlalutyo.
I-Atresplayer ilungisa ezinye zeebugs zayo ezininzi kolu hlaziyo
Emva kohlaziyo lwamva nje lwe-iOS, usetyenziso lweA3player lucinezela iintengiso ezizeleyo kwiscreen sabasebenzisi beprimiyamu.
Yenza iCamino de Santiago nge-iPhone yakho kunye ne-Wikiloc
Wikiloc sisicelo esibonelela ngeendlela ukonwabela indalo kwaye ilungile ukuba ikukhaphe kwiCamino de Santiago
IPodcast 9 × 36: Ukuvalwa kwexesha
Silivala ixesha kunye nesiqendu sokugqibela apho sihlalutya yonke into eyenzekileyo kulo nyaka, eyona ilungileyo kwaye imbi kakhulu yeApple
I-9 × 35 podcast: iveki ene-iOS 12, i-watchOS 5 kunye neMacOS Mojave
Sikuxelela ukubonakala kokuqala emva kweveki kunye neebhetas ezazisenziwa nguApple kwinkulumbuso yokugqibela yeWWDC 2018
IPodcast 9 × 34: iOS 12 kunye nokunye okuninzi
Emva kwengcaciso-ntetho ephambili sihlalutya zonke iindaba esiziboniswe ngu-Apple eWWDC18, kunye ne-iOS 12 ekhokelayo
9 × 33 I-Podcast: Ukuhlaziywa kwangaphambili kweWWDC 2018
Ngaphantsi kweveki ngaphambi kokuba inkomfa yonjiniyela ifike eWWDC 2018 apho ...
I-9 × 32 iPodcast: IKhayaKit, Imibuzo kunye neempendulo
Sikunika iingcebiso zethu ukuqala kwihlabathi leKhayaKit, siphendula imibuzo yakho kwaye sikuxelele ngezixhobo zethu esizithandayo.
IPodcast 9 × 31: UGoogle ufumene uSiri ngasekunene
Emva komsitho osuswe ngokucocekileyo nguGoogle apho bekungekho zindaba zimnandi ukuqaqambisa ngaphakathi ...
IPodcast 9 × 30: Ukusilela kwe-Apple "
Emva kweenyanga zokuthetha malunga nokuthengisa okungalunganga kwe-iPhone X, iApple ishiya wonke umntu ethe cwaka ngamanani ayo engeniso. Kodwa oku akukapheli kwaye kungekudala amahemuhemu afanayo avela kwimithombo efanayo iya kubuya.
IPodcast 9 × 29: Ngaba uvela kwi-Fortnite okanye kwi-PUBG?
Le midlalo mibini yomzuzu isebenza ukubonisa indlela amaqonga eselfowuni anokuba nendawo ebonakalayo kwihlabathi lemidlalo yevidiyo.
IPodcast 9 × 28: Ukusilela kweApple
Akukho kuphehlelelwa kweApple ngaphandle kokusilela okunxulumene noko. Imbali iyaziphinda-phinda kwakhona, nokuba kamva ingqinwe ngenye indlela, kwaye iPod yasekhaya ayinakuba yahlukile. Oku nezinye iindaba kwi-podcast yethu.
Iimfazwe zeNkanyezi: IJedi yokugqibela iyafumaneka ngoku kwi-iTunes, kwaye unoku-odola ulungele uMdlali wokuqala
Ngoku unokukhuphela imovie ye-Star Wars yakutshanje kwi iTunes. Unakho uku-odola kwangaphambili Umdlali olungeleyo, Imuvi yakutshanje kaSteven Spielberg.
IPodcast ast 9 × 27: Phakathi kwe-iPad kunye neeprosesa umdlalo uya
IPad entsha 2018, utshintsho lweeprosesa ukusuka kwi-2020 kunye nezinye iindaba zeveki ezigutyungelwe kwesi siqendu esitsha sepodcast yethu yeveki.
IPodcast 9 × 26: Ekupheleni sinesiganeko ngo-Matshi
Emva kweeveki ezininzi zokulinda kwaye xa kubonakala kungenakwenzeka ukuba iApple ibhengeze umsitho wasentwasahlobo, ithumele ...
Abahlekisi abaphoswa lithuba lokuhlekisa ngengxaki yeApple Park
UDavid Broncano, khange afune ukuphoswa lithuba lokushiya le monologue inomdla malunga neengozi eApple Park, ekungagcinwanga kwaSteve Jobs.
I-9 × 25 podcast: I-Apple ibhengeza iWWDC 2018
I-Apple ibhengeze umsitho wayo wenyanga kaJuni, iWWDC 2018 apho iya kuthi iveze iindaba ze-iOS 12, macOS 10.14 kunye namanye amaqonga enkampani.
9 × 24 I-Podcast: Abaphathi begama eligqithisiweyo VS iCloud Keychain
Kule veki sijongana neendaba ezifanelekileyo, ezinje ngeApple yokuqalisa izixhobo ezingabizi kakhulu okanye ...
IPodcast 9 × 23: I-Apple ngoku ibheja kwii-headphone
Amarhe malunga nee-AirPods ezintsha kunye nezinye iintloko zentloko, kunye nezinye iindaba zeveki, zihlalutyiwe kwipodcast yethu.
IPodcast 9 × 22: I-Android iyaqhayisa "inotshi"
I-podcast yeveki apho sihlalutya iindaba ezivela kwihlabathi lobuchwephesha kugxilwe ngokukodwa kwiApple. Sithethe "ngeNotshi" kwi-Android, i-HomePod kunye nezinye iindaba ezibalulekileyo zeveki.
IPodcast 9 × 21: IPod yasekhaya ewe, iPod yePod ekhaya
Kule podcast yale veki sithetha ngePodPod yasekhaya, isithethi esitsha sikaApple, kunye nezinye iindaba ezikufutshane nenkampani yeapile
I-9 × 20 Podcast: Ngaba iApple ayilunganga ngePod yasekhaya?
Ngaba abo bagxeka iPodPod ngokuvalwa kakhulu kwaye baluncedo kuphela kwabo baneemveliso zeApple zilungile? Ngaba iApple kufuneka iyivulele ezinye iinkonzo zomntu wesithathu?
IPodcast 9 × 19: IApple ibetha iziqhoboshi ... kwakhona
Kule veki sihlalutya amarhe okuba iApple ithathe isigqibo sokulibazisa iindaba zayo ezinkulu ze-iOS 12 kude kube yi-2019 ukugxila kwintsebenzo.
IPodcast 9 × 18: Ukulinda kugqityiwe, iPod yasekhaya ilapha
Sihlalutya iindaba ezenzekileyo ngeveki ejikeleze iApple kunye netekhnoloji ngokubanzi, ukongeza ekuphenduleni imibuzo evela kubaphulaphuli bethu.
IPodcast 9 × 17; iminyaka elishumi yeMacBook Air, iindaba kunye nobuxoki
Isikhumbuzo seminyaka eli-XNUMX seMacBook Air sibonisa ukuqala kwepodcast yethu, kunye nezinye iindaba zeveki nobunye ubuxoki obupapashiweyo.
IPodcast 9 × 16: 2017 kunye no-2018, edlulileyo nekamva le-Apple
Isiqendu sethu sokuqala sonyaka apho sijonga khona indlela u-2017 ayenzele ngayo iApple, kunye noqikelelo lwethu kunye neminqweno ye2018.
IPodcast 9 × 15: Iihedfoni kunye nokuphelelwa lixesha okucwangcisiweyo
Isiqendu esitsha sepodcast yethu yeveki nganye apho siba nodliwanondlebe nabenzi beentloko zeDotts Vantablack kunye nokuhlalutya ezinye iindaba.
9 × 14 I-Podcast: IMac Pro ilapha
Sihlalutya iindaba zeveki ephelileyo, kubandakanya ukumiliselwa kweMac Pro kunye nokuthengwa kweShazam nguApple
I-Podcast 9 × 13: Phantse iKrisimesi eApple
I-podcast yeveki nganye kwiApple kunye netekhnoloji ngokubanzi apho sixoxa khona ngeendaba zamva nje, izimvo malunga nokusetyenziswa kunye nokunye.
IPodcast 9 × 12: IApple kwakhona kufuneka icele uxolo
U-Apple uzibophelele kwezona mpazamo zinkulu zingenangqondo kwimemori, eye yanyanzelisa ukuba iphinde ixolise kubasebenzisi bayo.
IPodcast 9 × 11: Konke malunga neenkqubo zeNAS
Isiqendu esitsha se-Actualidad iPhone podcast apho sinobukho bukaMacjosan oza kuchaza ubuhle be-NAS
9 × 10 I-Podcast: Ngaba unengxaki okanye uyabaxa?
I-iPhone X iqala ukubonakala kwimixholo yeendaba ngeengxaki ezahlukeneyo zescreen, izithethi, njl. Iingxaki zangempela okanye i-hype?
IPodcast 9 × 09: I-iPhone X ibangela ukuvela
I-iPhone X sele isesitalatweni kwaye sihlalutya izimvo zezi ntsuku zokuqala, uphononongo kunye namava ethu.
IPodcast 9 × 08: I-iPhone X ilapha
Kule veki sijonga iindaba ezivele kanye ngaphambi kokumiliselwa kwe-iPhone X, ukusilela kwayo kwimveliso kunye namanye amarhe.
IPodcast 9 × 07: IApple imamela abasebenzisi kwaye iyilungise
Kule veki u-Apple usungule i-Beta entsha ye-iOS 11 apho sinokubona ukuba ezinye ze ...
I-iPhone kunye neApple Watch ziyaqhubeka nokulawula phakathi kolutsha
Inqaku elitsha lephephancwadi likaPiper Jaffray lisibonisa iziphumo zophando kulutsha kwi-iPhone nakwi-Apple Watch.
9 × 06: Masithethe ngee-headphone kunye neBluetooth
UPablo Garrido wejelo le-Audio46 ngeSpanish ucacisa ukungathandabuzeki malunga neefowuni kwaye usenza izindululo ngohlobo ngalunye kunye nexabiso
Ukuba sesichengeni kuWhatsApp kuya kukuvumela ukuba ubone ukuba uthetha bani
Ubungozi obutsha obufunyenwe kwi-WhatsApp bongezwa ukuba busivumele ukuba sihlole incoko esinayo kwisixhobo sethu.
Isamsung iya "kugqitha" iApple ngenzwa yeminwe kwiscreen
Isamsung iya kuxhobisa esinye sezixhobo zayo ezitsha ngescreen seminwe esingaphantsi kwescreen, kodwa sisiphi esona sizathu sokwenyani kolu "phuculo"?
IPodcast 9 × 05: Ukusombulula ingxaki
Isiqendu esitsha sepodcast yeveki yeActualidad iPhone apho sithetha khona ngohlaziyo lwe-iOS 11 kunye nezinye iindaba zeveki
Sazi iinkcukacha ezithe kratya malunga nembonakalo ye-iPhone X
Siyazazi iinkcukacha ezithe kratya malunga nendlela i-iPhone X screen eza kujongeka ngayo kunye nendlela ezinye izinto ezinje ngesikrini sokutshixa okanye indawo yokulawula eyilwe ngokutsha.
Ingxolo ifunyenwe ngexesha lokufowuna nge-iPhone 8 kunye ne-8 Plus
Ingxolo ecaphukisayo ifunyenwe ngexesha lokuthetha ngelizwi okanye nge-IP ngelizwi nge-iPhone 8 kunye ne-8 Plus. Iyintoni le mpazamo ngenxa?
IPodcast 9 × 04: I-iPhone X iyigqithile i-iPhone 8
Kule veki kwipodcast yethu sihlalutya i-iPhone 8 kunye ne-8 Plus, ii-smartphones ezintsha ze-Apple ngaphandle ...
IPodcast 9 × 03: I-iOS 11 ilapha
Sihlalutya uhlaziyo kwi-iOS 11, izimvo zokuqala zabasebenzisi abafake le nguqulo intsha kunye nezinye iindaba zeveki
IPodcast 9 × 02: Uhlalutyo lwentetho ye-iPhone X entsha
Sihlalutya zonke iindaba athe u-Apple wazisa kuthi kwi-Keynote yayo yamva nje, njenge-iPhone X entsha, i-iPhone 8 kunye ne-8 Plus, i-Apple TV 4K nokunye
Yiyo indlela "elula" esinokuthi ngayo sibeke i-3,5mm Jack kwi-iPhone 7, kwaye iyasebenza
Le vidiyo ayiyi kukushiya ungakhathali kwaye iya kukunika isikhokelo sokongeza i-3,5 mm Jack kwi-iPhone yakho 7 ngala manyathelo alula.
IPodcast 9 × 01: Ukuvula indlela ye-iPhone 8
Kwiveki enye ngaphambi komnyhadala we-iPhone 8, siza kukuxelela yonke into esinokuyibona kwintetho ye-Apple, iinkcukacha zayo kunye namaxabiso
I-Dropbox ihlaziywa ngokuphucula eminye yemisebenzi esele inikiwe
Uhlaziyo lwamva lweDropbox lusivumela, ekugqibeleni, ukukhetha ukuba loluphi uhlobo lweefayile esifuna ukuvela ekuqaleni kwesicelo.
Uyazi njani ukuba yeyiphi inkampani evela kwi-iPhone
Sichaza indlela yokufumanisa ukuba yeyiphi inkampani i-iPhone eyokwazi ukuba ingavulwa kwaye ingakubiza malini ukuvula i-iPhone ngalo mqhubi.
Iingxaki ezili-10 eziqhelekileyo kwi-iPhone 6 kunye nendlela yokuzisombulula
Sombulula ezona ngxaki zixhaphakileyo ze-iPhone 6 kunye ne-6s (eziqhelekileyo kunye ne-Plus) ngeenguqulelo ezahlukeneyo ze-iOS. Ngaba i-iPhone 6 yakho iyasilela? Yilungise apha.